Pravasi Archives - Online Media
तपाईं अहिले Pravasi सम्बन्धी खबरहरु हेर्दै हुहुन्छ |
Arts, International, Life Style, News, Pravasi, Research, Thoughts Comments are Off
समृद्ध नेपाल र श्रमिक महिला बिन्दा पाण्डे/ विश्वमा औद्योगिक विकाससँगै महिलाहरू आर्थिक उपार्जनको औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुन थाले । काम गर्दै जाँदा आफ्नो श्रम सस्तो श्रमका रूपमा शोषणमा परेको उनीहरूले थाहा पाए । यसबीचमा १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । घोषणापत्रमा श्रमिक महिलाको श्रम शोषणका ’boutमा पनि उल्लेख थियो । सो कुरा विभिन्न भाषामा उल्था हुने र प्रचार गर्ने कामले तीव्रता पायो । महिलाको श्रम शोषणका ’boutमा थप चर्चा
दक्षिण कोरिया/ तमु धिं ल्होछार संगै मकवानपुर सांगितिक धमाकाको पोष्टर विमोचन सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा महामहिम राजदुत अर्जुन जंग सिंहको प्रमुख आथित्यमा भएको हो ।सिंहले पोष्टर विमोचन गर्दै तमु ल्होछारमा गरुं समुदायलाई संबोधन गरेको छ । सबै जात जाती समुदाय, धर्म, संस्कृति र संस्कार समान रहेको बताएको छ । कार्यक्रममा एनआरएन एशिया प्यसिफिक उप संयोजक जुनु गुरुं, एनआरएन दक्षिण कोरियाकी अध्यक्ष लक्ष्मी गुरुं लामा, एनसिसिकी अध्यक्ष अन्जु केसी,
न्यायालयमा पहिलो र अन्तिम दिन, न्यायाधीशहरू विवेक र बुद्धिमा भर पर्ने प्राणी हो, बल र शक्तिमा होइन ।
न्यायालयमा पहिलो र अन्तिम दिन न्यायाधीशहरू विवेक र बुद्धिमा भर पर्ने प्राणी हो, बल र शक्तिमा होइन । – सुशीला कार्की २१ पुस ०६५ को बिहान साढे ११ बजे मोरङ जिल्ला अदालतमा बहस गर्दै थिएँ । एक जना कर्मचारीले इजलासबाहिर कुरिरहेका रहेछन् । म निस्किँदै गर्दा तिनले एउटा नम्बर दिँदै भने, ‘न्यायपरिषद्बाट खोजी भएको थियो ।’ मैले पनि के परेछ भनी तुरुन्त मोबाइलबाट सम्पर्क गरेँ । तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव प्रकाश
 जाडोमा धेरैजसोको छाला सुक्खा हुन्छ । त्यसैले पानी प्रसस्त मात्रामा पिउनुपर्छ ।  सुक्खा–तैलीय जस्तोसुकै छाला भए पनि सुत्ने बेलामा कोल्ड प्लस मोस्चराइजर क्रिम लगाउनुपर्छ ।  सुक्खा छाला हुनेहरूले ओलिभ आयल प्रयोग गर्नुपर्छ भने एक दिनमा चारपटक मोस्चराइजर लगाउनुपर्छ ।  यो मौसममा स्क्रब तथा फेसवास प्रयोग गर्नु हुँदैन ।  घाममा बस्दा सिधै अनुहारमा घाम पर्ने गरी बस्नु हुँदैन ।  जाडोमा नुहाउनुअघि एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट आयलले
यी मध्ये अबको राष्ट्रपति को ?
काठमाडौँ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको अन्तिम मतपरिणाम आउन थालेको छ । योसँगै भावी प्रधानमन्त्री को होला ? चर्चामा रहेको छ । यसबाहेक भावी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख को बन्लान् ? यो प्रश्नमाथि पनि राजनीतिक वृतमा र आमजनमानसमा बहस शुरु भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका कम्युनिष्ट घटकहरुले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा औपचारिक रुपमा कसैलाई अगाडि सारेका छैनन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली यसका लागि प्रमुख दावेदार मानिएका
लन्डन: सोसियल इकमर्स प्लेटफर्म ‘सगुन’मा बेलायतमा रहेका गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएन)का अगुवाहरुले लगानी गरेका छन्।सगुनमा शेयर लगानी गर्न पाउने अवसर खुल्ला भएको घोषणा गरिएको केहि समयपछि यूकेबाट एनआरएनका अगुवाहरुले लगानी गरेका हुन्। एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामी एवं पूर्व अध्यक्षहरु सूर्य गुरुङ, मुछेत्र गुरुङ, मेजर रिटायर्ड डमर घले र कुल आचार्यले सगुनमा लगानी गरेका हुन्। एक आम नेपालीले अमेरिकामा शुरु गरेको स्टार्ट अप कम्पनी सगुनमा लगानी गर्न उनीहरुले आव्हान
केशवप्रसाद भट्टराई राजनीतिक स्थिरतामा भूराजनीतिक चुनौती भारत, चीन र अमेरिका नेपाली राजनीतिमा प्रभाव र प्रभुत्व राख्ने मुख्य बाह्य शक्तिहरू हुन्। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचनमा सहभागी भएको कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नेपाली जनताले असाधारण समर्थन प्रदान गरे। तर त्यस राजनीतिक उपलब्धिलाई उक्त गठबन्धनको नेतृत्वले कत्तिको उन्नत र गतिशील राजनीतिक र रणनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर स्थिरता र समृद्धिको राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने नेतृत्व क्षमता राख्दछ त्यो भने भविष्यले नै बताउला। Image